“Mkpụrụ Obi” na “Mmụọ”—Gịnị n’Ezie Ka Okwu Ndị A Pụtara? - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Costa Rican Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
MGBE ị nụrụ okwu bụ́ “mkpụrụ obi” nakwa “mmụọ,” gịnị na-agbata gị n’uche? Ọtụtụ ndị kweere na okwu ndị a na-egosi ihe a na-adịghị ahụ anya nakwa nke na-adịghị anwụ anwụ nke na-adị n’ime anyị. Ha na-eche na ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, akụkụ ahụ́ a, nke a na-adịghị ahụ anya, na-esi n’ahụ́ pụọ ma dịrị ndụ na-aga. Ebe ọ bụ na nkwenkwe a zuru nnọọ ebe nile, ọ na-eju ọtụtụ ndị anya ịchọpụta na ọ bụtụghị ihe Bible na-akụzi. Ya mere, gịnị bụ mkpụrụ obi? Gịnịkwa bụ ihe ahụ Okwu Chineke kpọrọ mmụọ?
“MKPỤRỤ OBI” DỊ KA E SI JIRI YA MEE IHE N’IME BIBLE
Nke mbụ, tụlee banyere mkpụrụ obi. Ị pụrụ icheta na asụsụ ndị mbụ bụ́ isi e ji dee Bible bụ Hibru na Grik. Mgbe ndị dere Bible na-ede banyere mkpụrụ obi, ha jiri okwu Hibru bụ́ ne′phesh ma ọ bụ okwu Grik bụ́ psy·khe′ mee ihe. Okwu abụọ ndị a pụtara ihe karịrị ugboro 800 n’Akwụkwọ Nsọ, n’ebe nile ha pụtakwara, New World Translation sụgharịrị ha ịbụ “mkpụrụ obi.” Ọ bụrụ na i nyochaa otú e si jiri “mkpụrụ obi” mee ihe n’ime Bible, ọ ga-edo gị anya na okwu a na-ezo aka n’ụzọ bụ́ isi (1) n’ebe ndị mmadụ nọ, (2) n’ebe ụmụ anụmanụ nọ, ma ọ bụ (3) n’ebe ndụ mmadụ ma ọ bụ nke anụmanụ dị. Ka anyị tụlee akụkụ Akwụkwọ Nsọ ụfọdụ ndị na-enye echiche atọ ndị a.
Ndị mmadụ. ‘N’ụbọchị Noa, e buuru mmadụ ole na ole, ya bụ, mkpụrụ obi asatọ, gabiga na mmiri ahụ n’enweghị mmerụ ahụ́.’ (1 Pita 3:20) N’ebe a, o doro anya na okwu bụ́ “mkpụrụ obi” na-anọchi anya ndị mmadụ—Noa, nwunye ya, ụmụ ya ndị ikom atọ, na ndị nwunye ha. Ilu 14:25 kwuru banyere ịnapụta mkpụrụ obi. Ọ na-ekwu sị: “Onye na-anapụta mkpụrụ obi dị iche iche ka onye àmà nke na-ekwu eziokwu bụ.” N’ebe a, mkpụrụ obi dị iche iche na-ezo aka n’ebe ndị mmadụ nọ. Ụfọdụ ebe ndị ọzọ Bible jiri “mkpụrụ obi” mee ihe maka mmadụ ma ọ bụ ndị mmadụ bụ Jenesis 46:18; Ilu 27:7; Ọrụ 27:37; na Ndị Rom 13:1.
Ụmụ anụmanụ. Mgbe ndị Izrel bọsịrị ọ́bọ̀ n’ahụ́ ndị Midia, Jehova gwara Mozis banyere ịtụ ụtụ, sị: “Unu ga-anarakwa n’aka ndị agha ahụ, bụ́ ndị na-apụkwuru usuu ndị agha ahụ, ụtụ ibuliri Jehova: otu mkpụrụ obi n’ime mkpụrụ obi [narị ise], n’ime mmadụ, na n’ime ìgwè ehi, na n’ime ịnyịnya ibu, na n’ime ìgwè ewu na atụrụ.” (Ọnụ Ọgụgụ 31:28) N’akụkụ Akwụkwọ Nsọ a, e zoro aka n’ebe ụmụ anụmanụ nọ dị ka “mkpụrụ obi.”
Ndụ Mmadụ. Mgbe ụfọdụ, okwu bụ́ “mkpụrụ obi” na-apụta ndụ mmadụ. Devid gwara Jehova, sị: “Bịaruo mkpụrụ obi m nso, gbapụta ya: n’ihi ndị iro m gbapụta m.” (Abụ Ọma 69:18) Gịnị ka Devid gwara Jehova ka ọ gbapụta? Ọ gwara Jehova ka ọ gbapụta ndụ ya. Tupu mgbe ahụ, ka Rechel na-amụ nwa ya nwoke, bụ́ Benjamin, ‘mkpụrụ obi ya pụrụ (n’ihi na ọ nwụrụ).’ (Jenesis 35:16-19) N’oge ahụ, Rechel tụfuru ndụ ya. Tụleekwa ihe Jizọs kwuru: “Abụ m onye ọzụzụ atụrụ ọma; onye ọzụzụ atụrụ ọma ahụ na-atọgbọ mkpụrụ obi ya maka atụrụ.” (Jọn 10:11) Jizọs nyere mkpụrụ obi ya, ma ọ bụ ndụ ya, n’ihi ihe a kpọrọ mmadụ. N’akụkụ ndị a nke Bible, o doro anya na okwu bụ́ “mkpụrụ obi” na-ezo aka ná ndụ mmadụ. Ị ga-achọtakwu ihe atụ nke ebe ndị e zoro aka ná “mkpụrụ obi” dị ka ndụ mmadụ ná 1 Ndị Eze 17:17-23; Matiu 10:39; Jọn 15:13; na Ọrụ 20:10.
Ịmụkwu Okwu Chineke ga-egosi gị na ọ dịghị ebe ọ bụla n’ime Bible nke e ji okwu ndị bụ́ “na-adịghị anwụ anwụ” ma ọ bụ “na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi” kọwaa okwu bụ́ “mkpụrụ obi.” Kama nke ahụ, Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na mkpụrụ obi na-anwụ anwụ.—Ezikiel 18:4, 20.
A MATA IHE “MMỤỌ” AHỤ BỤ
Ugbu a, ka anyị tụlee otú Bible si jiri okwu ahụ bụ́ “mmụọ” mee ihe. Ụfọdụ ndị na-eche nnọọ na “mmụọ” bụ okwu ọzọ e ji eme ihe maka “mkpụrụ obi.” Otú ọ dị, nke ahụ abụghị eziokwu. Bible na-eme ka o doo anya na “mmụọ” na “mkpụrụ obi” na-ezo aka n’ihe abụọ dị iche. Olee ihe dị iche na ha abụọ?
Ndị dere Bible jiri okwu Hibru bụ́ ru′ach ma ọ bụ okwu Grik bụ́ pneu′ma mee ihe mgbe ha na-ede banyere “mmụọ.” Akwụkwọ Nsọ n’onwe ya na-egosi ihe okwu ndị ahụ pụtara. Dị ka ihe atụ, Abụ Ọma 104:29 na-ekwu, sị: “Ị [Jehova] na-achịkọta mmụọ [ru′ach] ha, ha ekubie ume, wee laghachi n’ájá ha.” Jems 2:26 kwa na-ekwu na “ahụ́ nke na-enweghị mmụọ [ pneu′ma] bụ nke nwụrụ anwụ.” Ya mere, n’amaokwu ndị a, “mmụọ” na-ezo aka n’ihe nke na-enye ahụ́ ndụ. Ọ bụrụ na ahụ́ enweghị mmụọ, ọ nwụrụ anwụ. N’ihi ya, n’ime Bible, ọ bụghị nanị “mmụọ” ka e ji sụgharịa okwu ahụ bụ́ ru′ach kama e jikwa “ike” ma ọ bụ ike ndụ sụgharịa ya. Dị ka ihe atụ, Chineke kwuru banyere Iju Mmiri nke ụbọchị Noa, sị: “Ana m eme ka iju mmiri bịakwasị ụwa, ibibi anụ ahụ́ nile, nke ume [ru′ach] nke ndụ dị n’ime ya, ka ọ pụọ n’okpuru eluigwe.” (Jenesis 6:17; 7:15, 22) N’ihi ya, “mmụọ” na-ezo aka n’ike a na-adịghị ahụ anya (ihe ji ndụ) nke na-eme ka ihe nile e kere eke, bụ́ ndị dị ndụ, na-arụ ọrụ.
Mkpụrụ obi na mmụọ abụghị otu ihe. Mmụọ dị ahụ́ mkpa dịkwa ka eletrik dị redio mkpa—iji na-arụ ọrụ. N’ịgakwu n’ihu n’ihe atụ a, cheedị banyere obere redio. Ọ bụrụ na i tinye batrị n’ime obere redio ma gbanye ya, ikike eletrik dị na batrị ahụ ga-eme ka redio ahụ malite ịrụ ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na batrị adịghị na redio, redio ahụ agaghị arụ ọrụ. Otú ahụkwa ka ụdị redio ọzọ na-akwụsị ịrụ ọrụ mgbe a kwụpụrụ ya n’ọkụ eletrik. N’otu aka ahụ, mmụọ bụ ike nke na-eme ka ahụ́ anyị na-arụ ọrụ. Ọzọkwa, dị ka eletrik, mmụọ adịghị enwe mmetụta, ọ pụghịkwa iche echiche. Ọ bụ ikike na-abụghị onye. Ma, ọ bụrụ na ahụ́ anyị enweghị mmụọ ahụ, ma ọ bụ ike ndụ, ọ ‘ga-anwụ, wee laghachi n’ájá,’ dị ka ọbụ abụ ahụ kwuru.
Banyere ọnwụ mmadụ, Eklisiastis 12:7 na-ekwu, sị: “Ájá [nke ahụ́ ya] ewee laghachi n’ala dị ka o si dịrị, mmụọ alaghachikwurukwa Chineke Onye nyere ya.” Mgbe mmụọ, ma ọ bụ ike ndụ, si n’ahụ́ pụọ, ahụ́ na-anwụ ma laghachi n’ebe o sitere—ala. N’ụzọ yiri nke ahụ, ike ndụ na-alaghachikwuru onye o sitere n’aka ya—Chineke. (Job 34:14, 15; Abụ Ọma 36:9) Nke a apụtaghị na ike ndụ na-aga eluigwe. Kama, ihe ọ pụtara bụ na olileanya nke onye nwụrụ anwụ nwere ịdị ndụ n’ọdịnihu dabeere n’ebe Jehova Chineke nọ. Ndụ ya dị n’aka Chineke, dị ka a pụrụ isi kwuo ya. Ọ bụ nanị site n’ike Chineke ka a pụrụ inyeghachi mmadụ mmụọ, ma ọ bụ ike ndụ, ka o wee nwee ike ịdị ndụ ọzọ.
Lee nnọọ ihe nkasi obi ọ bụ ịmata na nke a bụ kpọmkwem ihe Chineke ga-emere ndị nile na-ezu ike “n’ili ncheta”! (Jọn 5:28, 29) N’oge a ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ, Jehova ga-emere onye nọ n’ụra ọnwụ ahụ́ ọhụrụ, ma mee ka ahụ́ ahụ dị ndụ site n’itinye mmụọ, ma ọ bụ ike ndụ n’ime ya. Nke ahụ ga-abụ nnọọ oge obi ụtọ!
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmụtakwu banyere otú e si jiri okwu bụ́ “mkpụrụ obi” na “mmụọ” mee ihe n’ime Bible, ị ga-achọta ihe ọmụma bara oké uru na broshuọ bụ́ Gịnị Na-eme Anyị Mgbe Anyị Nwụrụ? nakwa n’ Ụlọ Nche nke April 1, 1999, peeji nke 14-17, ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtachara ha.
← Gụọ isiokwu